I-WordPress nceda ucofe iziqhagamshelo ezingenayo | Martech Zone
Ngenye imini ndihlomle ngeposi ka-Robert Scoble, Uluhlu oluchasene noluntu. Yayiyiposi enkulu kwiindlela ezisebenzisa izixhobo ezinobuhlobo ezisetyenziselwa ukuzama ukukhuthaza ukulandela phakathi kwamalungu. Ngaphandle koluhlu oluhambelana nolwalamano lwakho lwangoku (umz.abafowunelwa bakho be-imeyile), ndicinga ukuba ezi zixhobo zifiphaza amandla amangalisayo enethiwekhi.
Kwanele oko, nangona kunjalo. Izolo ndiyiqaphele loo nto URobert Scoble kwavela amakhonkco am angenayo:
Ngaphandle kokuba kwakungekho nyani URobert Scoble esithi… Yaba luluvo lwam kwisithuba sikaRobert ngoku esasibhalisa njengekhonkco elibuyela kwindawo yam. Kuphela… ayisiyiyo ikhonkco elingeneyo lokwenyani okoko linayo nof ezinxulumene.
I-WordPress ifuna ukucoca amakhonkco angenayo ukuvumela abasebenzisi ukuba babone i-backlinks enesisindo xa kuthelekiswa namakhonkco alandelayo. Oko kungabonelela ngendlela elula yokugcina olu nxibelelwano lungafunekiyo kwideshibhodi yam.
tags: Delivra ukuthengisa nge-imeyileIiVidiyo zeNtengisomisoSe Intelamaqonga seo